Sitshintsha i-Orientation ye-One Page EZwini
Indlela Yokufaka Indawo Yemihlaba Kwimiqulu Yomfanekiso kwiLizwi
Ngaba unenkathazo yokufaka loo grafu ebanzi kumqulu wakho?
Kulula ukutshintsha ukuqhelaniswa kwexwebhu lonke leLizwi kodwa akulula kangangoko xa ufuna kuphela ukutshintsha ukuqhelaniswa kwekhasi elilodwa okanye amaphepha ambalwa kwirekhodi. Njengoko kuvela, unako ukufaka iphepha le-oriented landscape, eliyi-layout lekhasi elingenanto, ukuya kwidokethi esebenzisa ubukhompyutheni be-portrait, ukulungiswa kwiphepha eliqhelekileyo, okanye ngokuthe ngqo. Unokuba netafile ephakamileyo ofuna ukuyisebenzisa kwingxelo okanye umfanekiso okhangeleka kangcono kwi-orientation landscape.
KwiMicrosoft Word, unako ukufaka ikhefu lokuhlula ngesandla phezulu kunye nezantsi kwephepha ofunayo kwelinye i-orientation, okanye unokhetha umbhalo kwaye uvumele iMicrosoft Word ukuba ifake amacandelo amasha kuwe.
Faka iSahlulo seSahlulo uze ufake iSifundo soBomi
Ukuxelela iMicrosoft Word apho ukuphula iphepha ngaphandle kokuvumela iLizwi lenze isigqibo, faka iCandelo leSahluko seCandelo elilandelayo ekuqaleni nasekupheleni kwesicatshulwa, itafile, umfanekiso okanye enye into oguqula ngayo i-orientation yekhasi.
Faka isahluko sekhefu ekuqaleni kwendawo ofuna ukuyijika:
Khetha ithebhu yokuPhatha kwekhasi .
Cofa kwiMenyu yokuHlahla kwePhulo kwiCandelo lokuPhatha kwekhasi .
Khetha Ikhasi elilandelayo kwiCandelo lokuPhula kweCandelo.
Phinda uphawule amanyathelo angentla apha ekupheleni kwendawo ofuna ukuyijika.
Vula iwindi yeenkcukacha zokumisa ngekhalenda ngokuchofoza itololi encinci ekhoneni elingezantsi lelo candelo.
Cofa kwi- Margins ithebhu.
Kwinqanaba lezoBomi , khetha iNgqamaniso okanye indawo .
Ngaphantsi kwefestile, kwi- Apply ku: uluhlu lokuhlalisa phantsi, khetha uxwebhu olukhethiweyo.
Cofa iqhosha le- OK .
Vumela iZwi lifake iCandelo lokuPhulwa kweCandelo kwaye ubeke isiXhosa
Ukuba uvumela iMicrosoft Word ukuba ifake ikhefu lekhefu, ulondoloza ugcino lwe mouse kodwa iLizwi liya kufaka ikhefu leqendu apho ikhetha khona.
Ungazibona ezi zikhefu kunye nezinye izinto zokufomatha ezifihliweyo ngokuya kwiTebhu yeKhaya kwinqanaba leNgxenye kunye nokucofa iqhosha lokubonisa / ukufihla - libhalwe ngophawu lomhlathi, olubukeka njengempendulo yangaphambili.
Ubunzima ngokuvumela iZwi ukubeka ikhefu lakho lekhefu liza xa ukhetha umbhalo. Ukuba awuyikugqamisa umhlathi wonke, imihlathi emininzi, imifanekiso, iithebula, okanye ezinye izinto, iMicrosoft Word ihambisa izinto ezingakhethiweyo kwenye iphepha. Qinisekisa ukuba uqaphele xa ukhetha izinto ozifunayo kwi-portrait entsha okanye ukuma kwe-orientation layout.
Khetha wonke umbhalo, imifanekiso, kunye namaphepha ofuna ukutshintshela kwi-orientation entsha.
Cofa kwiTebhu yoLungiselelo.
Kwiphepha lokuPhahla kwekhasi , vula ifowuni yeenkcukacha zokumisela iWindows ngokuchofoza umcibisholo omncinci onecaleni elisezantsi lecandelo.
Ukukhubaza umxube weSikrini kwiLizwi
IziHlomelo eziKhuselweyo eziKhethekileyo zootitshala abavela kwiMicrosoft
Yongeza umqondiso we-elektroniki kwi-Microsoft Office
Hlela Izicwangciso zeKhuseleko ze-Macro kwi-Microsoft Office Word
Indlela yokudala iMacro elula kwiMicrosoft Word 2010
Ukusebenza ngeedable kwi-Microsoft Word
Iimpawu zeMicrosoft eziPhambili zeMali kunye neziHlomelo zeBhajethi kunye neempapasho
Indlela yokukhubaza i-Smart Tags kwi-Microsoft Word
Guqulela iiPhepha zePhepha kwiiFayile zeFayile
Impucuko yeTid Meier V Cheats - PC
Imbali yeSonic iHedgehog nguSega Genesis
I-Mac OS X Lion Iimfuno ezimiselweyo
I-Mac ukuya kwi-Mac Transfer - Hambisa iinkcukacha zakho ezibalulekileyo ze-Mac
Iyini iNintendo DS Lite?
Yintoni i-Google Android?
Yintoni i-4G engenazintambo?
Pompa Imeyili Yakho nge-Apple Mail Stationery
Ukubuyiselwa kwe-iPhone 4S
IPadigm ye-CI Home, Pro, i-Elite In-Wall Speakers
Yenza isinqamlezo seFayile kwi-iPhone yakho okanye kwisikrini sasekhaya se-iPod
Indlela yokwenza iifowuni usebenzisa i-Alexa ye-Alexa
Yintoni iFayile yeZXP?
Indlela yokususa iiKhukhi kunye neCache kwiSiphequluli se-Chrome
Indlela yokwenza ngcono iifoto ze-Sunset nge-iPhone
I-AWOX StriimLINK I-WiFi I-Adapter yokusakaza ye-Stereo
Imidlalo emitsha ye-Wii U
Ungayitshintsha njani iSantya sokudlala kwiWindows Media Player
Linksys WRT54G Iphasiwedi eyiyo
I-Cell esebenzayo / i-Active Sheet Sheet
Ndingayilanda phi i-Web Browser Web Browser?